LIMBO, inowanikwa paApp Store ine chakakosha dhisikaundi | IPhone nhau
Zvekare tinokuzivisa iwe nezve inonakidza mutambo iyo yenguva yakatarwa inowanikwa neinokosha dhisikaundi. LIMBO inowanzo kuwanikwa muApp Store ye4,99 euros, asi kwenguva yakati wandei tinogona kuiwana isingasviki euro imwe, 0,99 euros. Chinhu chekutanga chinobata kutariswa kwemutambo uyu ndechekuti zviito zvese zvinoitika mune grey tones, hapana ruvara chero kupi, chimwe chinhu pakutanga chaigona kudzorera vashandisi vazhinji kumashure. LIMBO mutambo mukuru watinogona kungosvetuka, kufamba padhuze uye kushandisa bhatani rekuita, iro rinotibvumidza kubata kana kudhonza zvinhu.
Kunyangwe iri priori inogona kuita kunge mutambo wakapusa apo patinofanira kusvetuka sekunge wanga uri mutambo wepuratifomu, LIMBO mutambo watinofanira kushandisa pfungwa uye pane dzimwe nguva kuve wakanaka kwazvo mukukwakuka, nekuti zvikasadaro hatizokwanisi kufambira mberi mumutambo. Zvizhinji zvezvipingamupinyi zvatinosangana nazvo munzira zvinogona kugadziriswa nekukurumidza, zvisinei hazvo zvimwe zvingatitorera nguva yakareba kupfuura zvakajairwa uye kwatinozoedza tadzokororazve zvese zvinouya mupfungwa kuedza kuenda kumberi.
Chimwe chinhu chinomira mumutambo uyu kurira. Iyo yekuvandudza inotikurudzira kuti titambe nemahedhifoni, nekuti maruzha anogona zvakare kuve chikamu chemamwe ematambudziko atinosangana nawo munzira. Uye zvakare, kutamba nemahedhifoni kunovandudza zvakanyanya ruzivo rwemitambo. Kana iwe wakagara uchifarira kunakidzwa nemutambo uyu, ikozvino zvairi kutengeswa inguva yakanaka yekushandisa uye kutenga uyu mutambo unonakidza.
Kugadziridza kwekupedzisira: 05-12-2014
Saizi: 103 MB
Rated kwemakore 12 zvichikwira
Kugarisana: Inoda iOS 6 kana gare gare. Inoenderana ne iPhone kubva pa4s, iPad 2 kana yepamusoro uye iPod touch kubva kuchizvarwa chechishanu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » LIMBO, inowanikwa muApp Store ine chakakosha mutengo